Thwebula Baidu Antivirus 5.4.3.1489 – Vessoft
Thwebula Baidu Antivirus
Ikhasi elisemthethweni: Baidu Antivirus
Bǎidù Antivirus – a isofthiwe onamandla ukuze avikele ikhompyutha yakho kusuka izinsongo ehlukahlukene. Isofthiwe inikeza ukuvikelwa esiphezulu kohlelo, okuyinto kufezwa ngokusebenzisa izinjini ezahlukene. Bǎidù Antivirus isebenzisa modules ezahlukene ukuphepha of computer yakho, okufaka ukuvikelwa uhlelo, idatha abathwali, idatha at ukulandwa, iziphequluli futhi ungena ezingosini ze-inthanethi. Futhi Antivirus ilungisa ngokuzenzakalelayo database ukuqinisekisa ukuvikeleka esiphezulu kwesimiso yakho kusukela izinsongo ehlukahlukene. Bǎidù Antivirus siqukethe izikhumba ahlukahlukene ukushintsha ukubukeka futhi has kulula ukuyisebenzisa interface.
Sebenzisa ezahlukene antivirus izinjini
Ukuvikelwa izinhlobo ezahlukene izinsongo
Alulame ngokuzenzekelayo database
Amazwana ku Baidu Antivirus
Baidu Antivirus software ehlobene
Isofthiwe kuthola ngishiyeka ohlelweni bese iwasusa. Uhlelo inikeza search ephephile kwi internet kanye bavikeleke izigebengu.
Antivirus, Ukuvikelwa okuphelele
Ithuluzi esikahle ukuvikela ikhompyutha yakho ngokumelene amagciwane kanye Cyber ​​izinsongo. Isofthiwe kuthola nangempumelelo emabhuloki ezahlukene spyware kanye adware modules.
The okunokwethenjelwa software antivirus ubuchwepheshe besimanje ukuqinisekisa ukuvikeleka okuphelele kohlelo. Futhi isofthiwe isekela uhla amathuluzi ezengeziwe ukuhlanza nokwandisa uhlelo.
Le antivirus inezinhlobonhlobo zemisebenzi futhi isekela amathuluzi okuphepha aphambili ukuvikela ikhompyutha yakho ngokusongelwa okuhlukile.
Le unqulo wesi arab isekela yonke imisebenzi edingekayo ukuze uhlole i-intanethi ngokuphepha futhi uvikele ikhompyutha yakho ngokumelene namagciwane.
Isidlali semidya ukuthi isekela ngetakhiwo letehlukene. Isofthiwe ikuvumela ukuba bahlele umtapo umculo nibuke engezansi.
Isofthiwe ukuvumelanisa idatha phakathi kwekhompyutha kanye Windows Phone idivayisi. Isofthiwe kwenza ukuba ubuyekeze uhlelo yokusebenzisa yedivaysi kanye ukulawula uhlu lokudlala wezincwadi abezindaba.
English, Afrikaans, Français...